Qeybdiid: Maadaama diyaaraduhu qar iska tuurnimo sameeyeen xayiraadda waan qaadnay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qeybdiid: Maadaama diyaaraduhu qar iska tuurnimo sameeyeen xayiraadda waan qaadnay
28th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Galmudug, Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa maanta warbaahinta u sheegay in maamulkiisu ka laabtay xayiraad uu horay ugu soo rogay garoonka diyaaradaha woqooyiga Gaalkacyo kadib markii Puntland xayiraad saartay garoon Galmudug ka dhistay koonfurta magaalada.
Cabdi Qeybdiid oo shir jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo ayaa sheegay in Galmudug ogolaatay iney xayiraadda qaado garoonka kadib markii sida uu yiri shirkadaha diyaaraduhu sameeyeen qar-iska-tuurnimo.
“Maanta oo bishu tahay 28 September 2014 waxaa maamulka Galmudug xayiraadii ka qaaday garoonka diyaaradaha Gaalkacyo, kadib markii arrinta diyaaraduhu u muuqatay qar iska tuurnimo” ayuu yiri Cabdi Qyebdiid.
Wuxuu sheegay Qeybdiid in Galmudug tanaasushay maadaama garoonka Gaalkacyo dadka magaalada oo dhan ka faa’iideystaan, wuxuuna sheegay hadal laga dareemo karo iney suuragal tahay in garoonka Koonfureed kasoo degi doonaan diyaarado, kaasoo Puntland horay u diiday.
“Diyaaradaha waa lasoo ridi karaa, laakiin arrintu maaha dagaalkii dhulka ahaa ee la is feeryayey, marka Galmudug waxey go’aansatay iney tanaasusho, cilmigaas cusub waxaa laga baran doonaa reer Puntland, qaabka diyaaradaha marka la diido loo soo dejiyo” ayuu yiri Cabdi Qeybiid.
Wuxuu Cabdi Qeybdiid ku eedeeyey maamulka Puntland iney maalin kasta Gaalkacyo keenaan ciidamo, wuxuuna xusay iney doonayaan iney carqaladeeyaan shirka lagu dhisayo maamulka gobollada Dhexe.
“Puntland waxey maalin kasta Gaalkacyo kusoo gureysaa ciidamo, taasina nabad uma adeegeyso, waxeyn doonayaan iney carqaladeeyaan shirka gobollada dhexe, laakiin waxaan leenahay ‘Caalamku bal hanala arko waxa ay doonayaan’” ayuu yiri Cabdi Qeybiid.
Todobaadkii hore ayaa maamulada Puntland iyo Galmudug isku khilaafeen garoonkii hore ee magaalada iyo garoon cusub oo dhawaan la dhisay, waxaana midba ku dhawaaqay inuu xayiraad saaray garoonka maamulka hoosyimaada.
Hal maalin ayaa la sheegay in diyaaraduhu ka hakadeen Gaalkacyo, hase ahaataa markii dambe ayay duulimaadyadooda dib u bilaabeen, waxaana maamulka Galmudug go’aansaday inuu tanaasulo, iyadoo Qeybdiid markii uu ka tegay Muqdisho uu ka degay Cadaado.
Sawiiro: Sariirta dadka ku talaxtegay aaladda Facebook